Umatshini wegloves weZemidlalo -iTshayina abaVelisi beenkonzo zeGlobal China, abaThengisi
Vula iiglavu zasemva
Iigloves ezifanelekileyo zomntu wonke othanda imisebenzi yangaphandle yemidlalo efana nokuhamba ngebhayisikile, ukuhamba ngebhayisikile, ukuhamba ngebhayisekile, isithuthuthu, umthambo, ukukhwela intaba, ukuhamba ngesikhephe, ukuloba, ukuloba, ukukhwela intaba, kunye nokuhamba ngeenyawo. Iipuzzle zesundu zesiponji yoyilo lwe-ergonomic zikhusela isundu. Iguquguqukayo, yomelele, kwaye yonyusa intuthuzelo ngelixa isebenza ngaphandle. Khusela umdibaniso wesandla kunye nesandla, uphephe ukwenzakala kunye nokuqaqamba.
Iiglavu zokuqhawula iigrey
Ubusi obucekeceke beentambo zesinyithi i-silicone anti-slip, intofontofo, incancisa. Ilaphu elenzelwe umthi ngasemva ukuze likwazi ukuphefumla, ukuphefumla nokuguquguquka. Uyilo oluyiminwe yomunwe, isithupha kunye ne-knuckle lunokugoba ngokwemvelo. Xa usonga isixhobo somphefumlo, unokukukhusela esenzakalweni esenzakalweni. I-wristband eyandisiweyo ye-elastic, i-Velcro paste eyomeleleyo. Ulwimi olukhululweyo ukuze linxibe lula.
Iigloves zemidlalo ye-Gym
Amalungu esundu awanakho ukunxiba ngakumbi ngegloves eziqhelekileyo, inxalenye yomnwe yenzelwe ngeminwe yokugcwalisa ngeminwe ukukunika ukhuseleko olungakumbi. Umva wesandla senziwe ngesikhumba ekumgangatho ophezulu kunye nelaphu elinokuphefumla ngalo, ukugcina izandla zakho zome kwaye zinokuphefumla ukuthintela ukutyibilika ngesandla. Umlomo we-latex ongenamthungo uthambile kwaye ukhululekile, unyusa amandla esandla.